Igumbi lokuzindla eduze ne-South Berkeley (Ashby) Bart - I-Airbnb
Igumbi lokuzindla eduze ne-South Berkeley (Ashby) Bart
Ikhaya elihle, elikhulu, nelipholile lika-Victoria kanye nesethingi yokuphumula-njengendawo yase-South Berkeley-North Oakland, eduze nesiteshi sase-Ashby Bart (isitimela sendawo maphakathi ne-South Berkeley) . Imibalabala futhi iyingqayizivele, itholakala kalula eduze namathilomu, izindawo zokudlela, amabhikawozi, kanye nokudla okudumile kwase-Berkeley ejulile.!
Le ndoda endala enhle, ikhaya elidala le-Victoria, inengaphakathi elimibalabala futhi iyindlu enobuntu nomphefumulo. Yisiphepho esinemibala egqamile nesikhuthazayo nendawo yokuthola ukuvuselelwa komphefumulo wakho. Nginamakamelo ezivakashi amaningana endlini, ngakho ukuze ubone ezinye izindlu, chofoza isithombe sami noma igama ukuze uye kuphrofayili yami futhi ubone ezinye.
Wonke amakamelo ahlala umuntu oyedwa kuphela ukusiza ukugcina indawo ethulile.
Le ndlu itholakala kalula esifundeni somngcele sase-Berkeley-Oakland esiseduze kakhulu nesiteshi sase-South Berkeley (Ashby) Bart, isitimela sendawo. Lokhu kukuvumela ukuthi uye ezindaweni eziningi zase-San Francisco Bay ngaphandle kwemoto. Ungafika ngokushesha edolobheni lase-San Francisco phakathi nemizuzu engu-30-45 nge-Bart.
Phakathi nebanga lokuhanjwa ngezinyawo kwamabhuloho angu-5, uzothola: izindawo zokudlela eziningana zohlanga (i-African ne-Mexico zifika engqondweni), amathilomu angu-2, amabhikawozi angu-2, i-La Pena Latin American cultural center, i-Starry Plough Irish Pub, umtholampilo ophansi wokudla we-acupuncture, nesitolo sokudla sase-Berkeley, kanye nesitolo sayo esikhulu esidumile sokukhiqiza okusha. THere iyimakethe yabalimi yamasonto onke eqhele ngezakhiwo ezimbalwa.
Hamba ibanga elikude kancane enyakatho, futhi kungakapheli imizuzu engu-30 noma amamayela angu-1 uzofika edolobheni lase-Berkeley, nase-University of California e-Berkeley, izindawo zamabhayisikobho nezitolo eziningi, izindawo zokudlela, nezinye izindawo zokuheha ezinjengezitolo zezincwadi, amahlaya/izitolo zemidlalo. (I-Downtown Berkeley nayo isendaweni eyodwa yokuphumula.) Ngokuhambahamba e-East, uza endaweni yokuthenga ye-Elmwood avenue ngaphakathi kwe-mile, nezitolo zayo, izindawo zokudlela (i-India ne-Mediterranean phakathi kwazo), imidlalo yaseshashalazini nezinye izitolo ezithakazelisayo.
Izindawo ezizungeze amadolobha amakhulu zase-Elmwood ne-Claremont zase-Berkeley ziqhele ngemizuzu engu-15-20, futhi uhambo lwezinyawo lwale ndawo lunamakhaya amahle kakhulu angu- $ 2 $ 5 million Craftsman anokwakheka okuhle kanye nokubukeka kwendawo.
Isilinganiso se-THe Walkscore sendawo yendlu yami singu-88 kokungu-100 okungenzeka sikwazi ukuhamba ngezinyawo: noma yisiphi isilinganiso esiphezulu futhi cishe uzoba nenkinga yokuthola indawo yokupaka. Ukukhuluma ngokupaka: kunenqwaba yamahora angu-2 okupaka emgwaqweni wami -- ngoMsombuluko nangoLwesihlanu, ngo-8am kuya ku-6pm, kunomkhawulo wamahora angu-2 -- kodwa ungathola izindawo ezincane zokupaka ezingenamkhawulo emgwaqweni wami naseziseduze.
IKAMELO: Leli yigumbi elihle elinelanga elinamafasitela abonakalayo ALETHA
ilanga lasekuseni, futhi lipeyintwe ngezindonga eziphuzi, i-orange trim, i-lavender ceiling. Inombhede olala abantu ababili noma owodwa, ikhabethe elikhulu elinenduku yezingubo namashalofu ezingubo, itafula nesihlalo, amashalofu ezincwadi kanye nekhabethe elincane, kanye nendawo yokubeka amajazi. Kunesihlalo esilula kakhulu. Ngaphandle kwamafasitela asogwini ungabona indawo enhle yengadi. Ikamelo lineshalofu elikhulu lezincwadi elinenani eliphelele lezincwadi ongazibhrawuza. ( Zizwe ukhululekile ukubhrawuza kodwa sicela ungathathi noma yiziphi izincwadi zami endlini yami. )
Uzokwabelana ngekhishi namagumbi okugezela (indlu yokugezela eyodwa egcwele kanye negumbi lokugeza elilodwa) nezinye izivakashi ezingu-2 kanye nami, nakuba ngingapheki kakhulu. Angiyena umuntu odla imifino, futhi ayikho imikhawulo kulokho ongase ukupheke lapha. Kukhona i-wifi nelondolo elitholakala esayithini. Igumbi lokugezela eliyinhloko linobhavu onendawo yobhavu wengilazi: kukhona futhi ishawa enamathayili ongayisebenzisa uma uthanda.
Ngokuyinhloko, lena yindlu enemibalabala futhi ejabulisayo, lapho ungeke uthole khona amakamelo amhlophe noma “amhlophe”. Amakamelo anophahla oluphakeme lwezinyawo eziyishumi kanye nokukhunta okukhangayo. Yonke iminyango yasekuqaleni ye-redwood kanye neminyango yephaneli ye-redwood ihlala. Ikhishi elivulekile liwolintshi elinetafula eliluhlaza okwesibhakabhaka nephansi lamathayili eliluhlaza okotshani, elinesitofu se-antique Wedgewood. Kulabo abahlala amaviki angu-4 noma ngaphansi, kunezidingo eziyisisekelo ongazisebenzisela ukupheka kwakho. (Kulabo abahlala isikhathi eside, sicela uthenge ukudla kwakho kwasekhishini). Ekhishini ngiphinde ngibeke amabalazwe nezincwadi ezizokusiza ekuqondiseni ezitolo zendawo nasezindaweni ezithandwayo.
Futhi zizwe ukhululekile ukujabulela ingadi engemuva kwendlu, mhlawumbe uvakashele izinkukhu kanye "ne-Fluffy Butt Farm", kanye nama-rafits e- "Bunny Castle"! Laba abahlaziyi bayakujabulela ukuvakashelwa futhi bajabulela ukuboniswa kwamagilebhisi amnandi noma okunye ukungcola okungase kudingeke uhlinzeke ngakho. Noma uhlezi eceleni kwedamu elingemuva elinamanzi empompi.
Izindawo ezivamile zendlu zihlanzwa ngobungoti kanye ngenyanga, futhi ngihlanza lezi zindawo kanye ngeviki. Ngaphandle kwalokhu, izivakashi kudingeka zihlanze ngokwazo lapho zisebenzisa izindawo ezisetshenziswa abantu bonke (bheka imithetho yendlu ukuze uthole imininingwane eyengeziwe).
emgwaqweni kuyatholakala, ngokuvamile kunomkhawulo wamahora angu-2 ngezinsuku zaphakathi neviki, kodwa kunezindawo zokupaka ezingenamkhawulo futhi phakathi nezakhiwo ezingu-1-2.
Nginebhayisikili elitholakalayo ukuze lisetshenziswe isivakashi ngokukhokha imali ekhishwa uma isivakashi senze umonakalo eyengeziwe ukuze ngikhokhele ukulahlekelwa okungaba khona.
Sicela ufunde imithetho yendlu ngezansi ngaphambi kokubhukha, ukuze uqiniseke ukuthi uzokhululeka ngesethingi. Ngicela ukuthi labo abangaba izivakashi bagcwalise iphrofayili ephelele kuhlanganise nesithombe, kanye ne-imeyili eqinisekisiwe nenombolo yocingo.
Izivakashi ezingaba khona zivame ukubuza ngokuphepha kwendawo. Izivakashi zithe zizizwe ziphephile endaweni. Mina noma yimuphi umqashi/isivakashi asizange siphanga noma sishintshwe eminyakeni engu-9 engihlale lapha. Ngaphandle kokusho amaqiniso anjalo, angikwazi ukuphendula imibuzo evamile mayelana nokuthi "indawo iphephile kangakanani", noma "ngizobe ngiphephile ukwenza i-X", noma yikuphi okungaphezu kwalokho engingaphendula umbuzo mayelana nokuthi kungenzeka kanjani ukuthi ushaywe yimoto lapho uhambahamba endaweni engumakhelwane wami. Ukuphepha kungokomthetho nesihlobo, futhi kuncike ekusetshenzisweni komqondo ovamile, njengokuqapha indawo ezungezile yomuntu, futhi ungahambi emgwaqweni ngenkathi ukhuluma ngocingo nokukhangisa ngezinto zikagesi ezibizayo. Ama-roberies enzeka azungeze indawo ye-Ashby Bart, nakuyo yonke i-Oakland ne-Berkeley. Ayikho indawo ephephile ngokuphelele.
OKWENGEZIWE: Njengoba ngingu-Horary Astrologer, sicela ubuze ukuthi ungaba nesithakazelo yini kimi ukwenza ukuhunyushwa kwe-Horary Astrological ngokuqondene nombuzo ongase ube nawo. Ngeminye imibuzo ngizokhokhisa imali ekhokhwayo engu- $ 20 ngokufunda ngakunye, futhi kwezinye izinhlobo zemibuzo ngingakunikeza ukutolikwa kwamahhala.
Le ndlu ibiyindlu yomphakathi yohlobo olulodwa noma enye iminyaka engaphezu kwengu-40, futhi ngineminyaka engaphezu kwengu-14 yokuqashisa amakamelo endlini yami nokufunda indlela yokwakha indawo enokuthula ukuze abanye bajabule. Yindlu enkulu, futhi ngeke uzizwe ugcwele lapha: iyindawo enhle yokuhlala uma uthanda ubumfihlo bakho futhi ujabulela ukuzimela kwakho.
Ngikwamukela ukuthi uze ujabulele ukuvakasha okuzolile okuvela emhlabeni wokusebenza futhi uvuselele umuzwa wakho wokuzijabulisa nokukhanga!
Sesha amagama ayinhloko: ukuphumula, ukuzindla, ukucabangela, i-VIPassana, ukuzindla, i-dharma, ukuzindla, ukuthula, ingadi, indlwana, eyimfihlo, eyimfihlo, ezimele, eguquliwe, engokomoya, i-Buddha, i-Buddha, i-Zen, i-Zafu, ukuthula, ubuciko, umtapo wolwazi, ukunakekela, ukuvuselela, ingqondo, imvelo, izilwane, izinkukhu, izinkukhu, amapulazi asedolobheni.
4.77 · 95 okushiwo abanye
Indawo eseduze iyibhulokhi elilodwa lendawo yokuhlala ethule kakhulu enemizi eminingi yomndeni owodwa, kodwa futhi siyibhulokhi elilodwa kude nomgwaqo omkhulu onamakhefi amaningi nezindawo zokudlela, futhi sihamba ibanga ukusuka edolobheni laseBerkeley kanye ne-UC Campus.
Ngithanda ukukhuluma nezivakashi lapho zifika, kodwa ngingumuntu ozimele kanye nomuntu odinga amabhuloho amakhulu esikhathi sangasese samaphrojekthi okudala, ngakho-ke ngemva kokufika ekhaya ngivela emsebenzini ngivame ukuchitha isikhathi ngedwa. Futhi ngiphuma kakhulu ngezimpelasonto. Ngivame ukuxoxa nezivakashi uma ngizizungeza...uma uthanda ukusebenzisana nabanye, kuhlale kunesivakashi esingaphezu kwesisodwa endlini futhi kungenzeka ukwazi abanye abantu abavela emhlabeni jikelele.
Ngithanda ukukhuluma nezivakashi lapho zifika, kodwa ngingumuntu ozimele kanye nomuntu odinga amabhuloho amakhulu esikhathi sangasese samaphrojekthi okudala, ngakho-ke ngemva kokuf…